Soo dejiso Samsung USB Drivers-ka oo iska illow Samsung Kies | Androidsis
Driver USB Wireless
Pablo Aparicio | | Samsung, Tababarada
Waqti dheer ka hor, si loo rakibo Darawaliinta USB-ga Samsung ku saxan kombuyuutarka casriga Samsung ama kaniini, waxaa lagama maarmaan noqotay in la rakibo softiweer nooca Kuuriya la yiraahdo Kies. Laakiin haddii mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan Android uu yahay xorriyaddiisa, maxay u doonayaan inay i xirxiraan iyagoo igu qasbaya inaan rakibo nooca software-ka ah kombiyuutarkayga si aan u rakibo darawallada? Haddii waxa aan dooneyno ay yihiin aaladdayada Samsung ee nooca moobiilka iyo kombiyuutarkeenna ay wada xiriiraan, mararka qaarkood waa uun lagama maarmaan rakibi Samsung darawalada
On Android waxaan ku guuleysan karnaa ficil ahaan wax kasta oo ay ugu mahadcelineyso bulshada horumariyaha iyo maya, muhiim maahan in la rakibo Samsung Kies. Haddii waxa aan dooneyno ay yihiin wadayaasha kaliya, waxaan rakibi karnaa kaliya wadayaasha. Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa halka laga helayo iyo sida loo rakibo si aad u macasalaameyso softiweerka ay Samsung isku dayeyso inay annaga naga ansixiso.
1 Waa maxay iyo maxay tahay Samsung Kies?
2 Maxay yihiin darawallada Samsung ee Android?
3 Soo dejiso oo rakib Samsung Drivers Samsung
3.1 Ka tirtirida noocyadii hore
3.2 Ku rakibidda xirmada cusub ee Samsung USB Drivers
Waa maxay iyo maxay tahay Samsung Kies?
In kasta oo isbarbardhigyadu ay noqon karaan wax laga xumaado, iyo inbadan oo ka mid ah kan aan sameyn doono, waxaan dhihi karnaa in Kies uu yahay a Samsung iTunes. In kasta oo iTunes ay sidoo kale bixiso shaqooyin kale, si loo maareeyo wax kasta oo ku jira iPhone, sida ku darista muusikada, dukumiintiyada ama cusbooneysiinta nidaamka, waxaan u baahan doonnaa inaan adeegsanno iTunes, aalad aan ogahay in isticmaaleyaal badani neceb yihiin. Sida aan ka akhrino bogga rasmiga ah ka Samsung, «Samsung Kies ku xir mobilkaaga kombuyuutarkaaga, fududeynta is waafajinta xogta u dhexeysa aaladaha iyo helitaanka barnaamijyo cusub«.
Fikradayda sida ugu fudud ee wax loola wadaagi karo wax kasta oo ku saabsan Android, waxaan u maleynayaa inay jiri doonaan tiro yar oo adeegsadayaal ah oo doonaya inay ku rakibaan Samsung Kies kombuyuutarkooda maqaalkani wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ka caawiyo arrintan.
Soo dejiso darawallada la cusbooneysiiyay ee saldhigyada Samsung
Maxay yihiin darawallada Samsung ee Android?
Tani waa weydiin ay adeegsadayaal badan oo khibrad la’aan ah na weydiinayaan. Kontaroole kama badna mana ka yaraado darawal, laakiin waa erayga Isbaanishka. RAE kuma jirto erayga "darawal", laakiin waxaa loo isticmaalaa wax badan markaan ka hadlayno xisaabinta marka loo eego erayga "kontorol". Waxay la mid tahay adigoo dhahaya ama qoraya "PC", ereyo gaagaaban oo macnaheedu yahay "Kumbiyuutar Shakhsiyeed" oo aan waligeen ku isticmaali doonin Isbaanishka. Marka ugu fiican, haddii aan dhahno "Kumbuyuutar" halkii aan ka dhihi lahayn "Kumbuyuutar," waxaan dhihi lahayn "Kumbiyuutar Shakhsiyeed," innaga oo beddelayna ereyada isku xigxiga
Darawal A (ka Darawalka Aaladda) ama Darawal ka ah (Darawalka Aaladda) waa yar yahay barnaamijka kombiyuutarka taasi waxay u ogolaaneysaa a Nidaamka hawlgalka wuxuu la xiriiraa durugsan (qalab caawiya oo madax-bannaan ama qalab ku xiran processor-ka), ka-saarista qalabka iyo bixinta is-dhexgal si loo isticmaalo qalabka. Si fudud u dhig, nidaamka qalliinka si uu awood ugu yeesho adeegsiga qalab kasta oo dibedda ah, wuxuu u baahan yahay barnaamij gaar ah oo software ah oo awood u leh inuu kula xiriiro. Waxaa laga yaabaa in kan ugu yar xusuusto, laakiin toban sano ka hor, inuu awood u leeyahay inuu isticmaalo aag kasta, sida a web CamIyada oo kombiyuutar Windows ah, waxaan ku khasbanaaneynay inaan rakibno softiweer ku yimid CD. Haddii kale, munaasabado badan, ugu badnaan (laga bilaabo XP) waxay ogaadeen inuu jiro kamarad, laakiin ma shaqeyn. Wadayaasha CD-ga ku yimid (weli waxay ku jiraan alaabooyinka hadda jira qaarkood) waxay ahayd inay kaamerada si habsami leh u socoto.
Soo dejiso oo rakib Samsung Drivers Samsung
Ka tirtirida noocyadii hore
Ka hor intaadan bilaabin rakibida nooca cusub ee darawallada rasmiga ah ee Samsung, waa inaan nadiifinta. Waxaan ku sameyn doonaa nadiifintaan annaga oo si fudud u baabi'inayna noocyadii hore ee aan horey ugu rakibey kombuyuutarkeena. Si tan loo sameeyo, waxaan raaci doonaa talaabooyinkan:
Waxaan fureynaa Windows Control Panel.
Marka aan ku jirno Guddiga Xakamaynta, waxaan doorannaa ikhtiyaarka "Ku dar ama ka saar barnaamijyada."
Marka xigta, waxaan gujineynaa xirmadii hore ee Mobile-ka Samsung Mobile ka dibna "Uninstall / Change". Waxaan sidoo kale ku sameyn karnaa adigoo gujinaya xirmada wadaha ee aan dooneyno inaan ka saarno.
Waxaan sugeynaa oo, marka howsha rakibaadda ay dhammaato, waxaan diyaar u noqon doonnaa inaan rakibo xirmada darawalka cusub.
Ku rakibidda xirmada cusub ee Samsung USB Drivers
Haddii nadiifintu sahlan tahay, rakibidda xirmada darawalnimada cusub ee Samsung way ka sii fudud tahay, maadaama ay tahay feyl la fulin karo. Waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan ka soo degsano iyaga CADADKA, ordo feylka oo raac dardargelinta waxaa muujiyey saaxir rakibaadda. Haddii, sabab kasta ha noqotee, aad ku rakibto darawallada xiriiriyaha hore oo aadan heli karin qalabkaaga Samsung, waxaad sidoo kale leedahay soo dejin kale oo ah Samsung USB Drivers-ka laga heli karo CADADKA.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, laga bilaabo Windows 8 Qaybta wadayaasha ayaa si weyn loo hagaajiyay ilaa iyo 2012-kii mar dambe uma baahnin inaan rakibo wax si aan aagagga agabkeygu u shaqeeyo aniga iyo xitaa qaybaha gudaha. Ilaa Windows 7 waxay ahayd lagama maarmaan in la rakibo darawalada Motherboard-ka (oo ay ku jiraan wadayaasha sawirada iyo kaararka codka), laakiin intaas ka dib. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan dooneynay inaan cusbooneysiino qoraalkan maxaa yeelay wali waxaa jira in badan oo idinka mid ah oo dhibaato ka haysato helitaanka taleefankaaga Samsung iyo kombiyuutarkaaga si ay ula xiriiraan
PC-gu ma aqoonsana Android-kayga, maxaan sameeyaa?
Ma ku guuleysatay inaad rakibtid Driver USB Wireless oo ka dhiga inay shaqeeyaan?
Macluumaad dheeraad ah - Samsung Galaxy S, ku cusbooneysii adoo adeegsanaya odin ilaa firmware 2.3.6 iyo xididkeeda CF
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Driver USB Wireless
60 faallooyin, ka tag taada
Iyo mac ma ogaan doontid meesha aan kala soo bixi karo..mahadsanid
Waan jeclahay sawirka Francisco!
Ku jawaab olekim
Mootzo Garcia dijo
Raaxo, mahadsanid wax badan ayey i caawisay 🙂
Ku jawaab Mootzo García
sidee u soo degsadaa?
Ku jawaab taty
Boostada waa iskuxiraha dhamaadka iyo qoraalka
Nexus Gala dijo
Xidhiidhkii ayaa jabay. Lama helo ama ma jiro. Xiriiriyaha dib maku celin kartaa? Mahadsanid
Ku jawaab Nexus Gala
Kaliya waxa aan u baahanahay mahadsanid
Ku jawaab Kevin
Waa salaaman tahay Francisco, darawaladaan USB-ga waxay iga caawiyaan sidii aan u rujin lahaa samsung galaxy s3 barnaamijka unlockroot-ka, waan ku cusbahay tan waxaanan rabaa inaan sameeyo wax walba oo sax ah qalad la'aan.
Haa, waxay lagama maarmaan u yihiin kombuyuutarka inuu si sax ah u aqoonsado terminalkaaga iyo shaqooyinkiisa oo dhan.
ma ku habboon tahay samsung galaxy GT-S5360L?
Waxaan u maleynayaa inay u shaqeyneyso dhammaan noocyada taleefannada casriga ah ee Samsung Android. 13/02/2013 10:03, "Disqus" ayaa qoray:
Jose Martinez dijo
Waxaan kale oo haystaa GT-S5360L kumbuyuutarkayguna ma aqoonsanin darawalada lagu rakibo…: /
Jawaab José Martínez
Dhibaato isku mid ah ayaan qabaa oo ma heli karo sida aan taleefankayga uga nadiifiyo pc-ga ...
Ku jawaab titi
Michel Mtz dijo
Dhibaato isku mid ah ayaan qabaa! D: amm ma heli karo BCM21553-Thunderbird iyo Habka Xakamaynta Abstract CDC: C
Jawaab Micheel Mtz
hi francisco, waxaan hayaa ace gt-s5830m, laakiin pc-gaagu ma aqoonsana. ama kies iyo sidoo kale waxaan horeyba u soo dejiyay darawalka samsung usb iyo waxba, sida aan sameeyo si aan u aqoonsado cel. Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada weyn. salaan ka timid cozumel
Ku jawaab raymundo
carolina ficco dijo
ma xallin kartaa? Isla sidaas ayaa igu dhacda
Ku jawaab carolina ficco
laga yaabee inaad nasiin kartid casharka ku saabsan sida loo isticmaalo
Ku jawaab edwin
Waxaan haystaa galaxy s midna midkoodna ama tanina ma aqoonsanayso taleefankayga si uun
Miyuu u shaqeyn doonaa kiniin samsung galaxy tubbada 7.2 gt p3113?
Muuse ugu jawaab
Waan gartay waxaad leedahay taleefanka gacantu ima aqoonsana
galaxi mini dijo
mahadsanid sahal ma noqon karto ...
Waad i badbaadisay .. hehe hada hadaan qolkeyga arko hadaan ubaahanahay samsung kies
Jawaab galaxi mini
Miguel Amezquita dijo
Horay ayaan horey usameeyay wayna shaqeysay laakiin hada ma shaqeyneyso, qof ayaa ii sheegi kara sababta fadlan
Jawaab Miguel Amezquita
Saaxiib wax ku biiris aad u fiican, sifiican ayuu aniga ila shaqeeyey. Waa la mahadiyey.
Mariano + Arg + dijo
Muuqaal cajiib ah, aad u fudud oo aan lahayn laabtooyin fara badan, waxay aqoonsaneysaa taleefankaaga gacanta adigoon rakibin Samsung Kies ... tabaruc aad u wanaagsan oo aad u badan waad ku mahadsan tahay ...!
Jawaab Mariano + Arg +
Mahadsanid, !!!!!! Waxaan furayay daaqadda si aan u tuuro taleefanka !!!
Ma ii sheegi kartaa sida talaabooyinku yihiin ... taasi waa, waa inaan ku xiraa kumbuyuutarkayga USB-ga ka hor inta aan rakibin ama sidee, waligey sidan ma sameyn: S
Ku jawaab tabata
tijaabiyey samsung galaxy ace si fiican ayuu u shaqeeyaa mahadsanid
Ku jawaab rano
Angel pichardo dijo
Haye, waan ku cusbahay tan waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad go'aan ka gaari karto sida looga saaro meesha isticmaalaha samsung 5560 tocco
Jawaab Angel Pichardo
Waxaan hayaa taleefanka gacanta ee Sansung S4 kaas oo aan si qalad ah u tirtiray feylal qaar oo sida muuqata ahaa ilaaliyayaasha WIFI, TV-ga iyo aqoonsiga codsiyada lagu rakibo taleefanka gacanta. Sideen dib ugu dhigi karaa taleefankayga gacanta ama aan u nuqulan karaa oo keliya darawaladaas?
sidee loogu dhejiyaa android-ka?
Ciise Martinez Hernandez dijo
francisco dhibaatadaydu waxay tahay in sansung galaxy s2 uusan rabin inuu ku xirmo pc-ka waxaana haystaa wadayaasha gawaarida waxna iskama dayo siyaabo kala duwan mana doonayo inuu isku xiro sansung galaxy-na waa bilaa jab nooca android-kayga. waa 4.0.4 i caawiya Mar dambe ma garanayo waxa la sameeyo si taleefankayga loogu xiro kombuyuutarka
Jawaab ku bixi Jesus Martinez Hernandez
sideen dib ugu cusbooneysiin karaa wax walboo ku jira galaxy note 2?
Aad baad u mahadsantahay, aad baan u walwalsanaa, si fiican ayey u shaqeysaa, waad fiicantahay 😀
Rafael Hernandez Uribe dijo
Saaxiib aad u fiican, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ku sigtay inaan helo hooyadan timo cirro leh oo cagaar ah illaa qoraalkaagu iga caawiyey mahadsanid.
Jawaab Rafael Hernandez Uribe
Everardo Garcia Vazquez dijo
way ii adeegtay mahadsanid rag
Jawaab Everardo Garcia Vazquez
hello marka aan rakibayo barnaamijka waxay ii sheegaysaa in aan qalabka ka jaro runtiina kuma xirna. ma i siin kartaa xfa xfa
Ku jawaab gabriel
Ma u shaqeyn doonaa Samsung SGH-i677 ??? Waxaan horeyba u raadiyay wax walba mana heli karo pc-ga si aan u aqoonsado taleefanka gacanta !!! ...
Isla waxbaa igu dhaca, ma ogtahay sida loo saxo?
Juan E. Viveros dijo
Waxaan rajeynayaa inay u shaqeeyaan samsung galaxy tab 3 lite
Jawaab Juan E. Viveros
waad fiirisaa dijo
in galaxy my gt-s6310l da 'yar oo si toos ah loogu ciyaaro ayaa u muuqda laakiin kaliya ikhtiyaar ah «Transfer files» isticmaal windows media player…. nacalad ¬¬
Ku jawaab tevez
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado talaabooyinka aan ku soo dejisan karo sawirada taleefankayga gacanta illaa kumbuyuutarkayga oo leh nooc ka mid ah wimdows xp. Waxaan ku xiraa taleefanka gacanta kumbuyuutarka qalabkuna iima akhriyo. sida aan sameeyo
Ku jawaab rosana
MILIYO A. dijo
Jawaab MILIANO A.
Aad baad ugu mahadsantahay ka qayb qaadashadaada. Waxay ahayd bogga kaliya ee aan ugu dambeyntii ku guuleystay inaan ku xiro moobilkeyga kombuyuutarka. Salaan iyo markale, mahadsanid
Waxaan kala soo degaa taleefankayga gacanta, laakiin waxay ii sheegtaa inaanan furi karin, markaan rabo inaan ku xiro pc-kayga ayay igu dhahdaa ma garanayo
Waad ku mahadsantahay tabarucaada, i aamin, wax badan ayey i caawisay… !!! XD
Ku jawaab Carlo
Waxaan iibsaday Samsung Ace S-5830-M qiyaastii laba sano ka hor, weligeed wax dhibaato ah ma siinin illaa dhowr bilood ka hor, waxaan u geeyay adeegga farsamada waxayna ii sheegeen inay leedahay xidid Samsung Young GT-S-5360-L ah oo la rakibay .
Sida ugu fiican ee taleefankani noqday, waxaan jeclaan lahaa inaan xafido oo dabcan aan isticmaalo. Maxaan sameyn karaa?
Mar kasta oo aan daarto, qayb ka mid ah shaashadda ayaa umuuqda sidii mid waxyeello gaadhay oo sanduuqa Samsung Young GT-S-5360-L.
Ku jawaab aarochapc
Joaquin Bresan dijo
Ku biir saaxiib wanaagsan, waad ku mahadsantahay wadaagista.
Jawaab Joaquín Bresan
Subax wanaagsan, waxay dhacdaa in galakeyga s3, taticl-ka uu xannibayo xusuusta iyo aagga hoose ee mobilka oo aad u kululaanaya, asxaabta qaar waxay ii sheegaan inay tahay taabashada, laakiin aagga oo dhan ayaa shaqeynaya, mid kale ayaa igula talinaya bedesho nidaamka qalliinka, waan jeclaan lahaa in laga caawiyo taas, tixgelin
Hernán Rendon dijo
Hello Francisco, magacaygu waa Hernán, waxaan ahay Venezuela. Waxaan haystaa Galaxy S4, waa inaan tirtiray wax ka mid ah waxyaabaha Android. Markii aan shido taleefanka, bootku ma dhammaanayo, wuxuu ku sii ekaanayaa aagga caddaanka oo leh xargo buluug ah oo buluug ah, waan ka saarayaa batteriga, dib ayaan u geliyaa mararka qaarkoodna wuu daaraa laakiin iyada oo aan "taabashada" shaqeynin, marar kale " taabashada "way shaqeysaa laakiin ma sameyso buuq marka aad fartaada ku dhajiso shaashadda ama dhawaaqa, dadka kale wax walba way shaqeeyaan laakiin daqiiqado yar ka dibna waa la daayaa iyada oo aan la taaban
Jawaab Hernán Rendón
Runtii waxaad tahay boqorka boqorrada.
Marcelo P dijo
Bdia, waan soo dejiyey barnaamijka SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones (3), laakiin nidaamka kombuyuutarkaygu wuu xannibayaa (Windows 10 home), wuxuu leeyahay "maamule ayaa xanibay arjigan", sidoo kale waxaan ku maamulay anigoo ah maamule isla markaana ka shaqeynaya gaashaanka darbiga difaaca, talo soo jeedin si aad ugu xirmi karto Samsung GT-S5570L Samsung, mahadsanid
Jawaab ku bixi Marcelo P
Jairo bermudez dijo
Aad baad u mahadsantahay
Jawaab Jairo Bermudez
Jose Sierra Diaz dijo
Hagaag, waan ka xumahay inaan diido sharraxaadda maqaalkan, waxaan u maleynayaa in shaqo intaa ka badan la qaban lahaa ... marka hore, waxay ila tahay geeri aniga inaad darawalada u geliso server aan soo dejisan oo bilaash ah sida la soo galiyay, dhammaan Xayeysiinta adduunka, si ay u helaan iyaga, tan labaad, waxay muujineysaa inay tahay xirmada darawalka cusub, iyadoon xitaa aheyn nooca ugu dambeeya, midka la deldelay waa 1.5.9.0 waxayna horeyba ugu jiraan 1.15.51.0 , iyo tan saddexaad, iskuxiraha meeday nooca rasmiga ah ee la daabaco, oo ka socda kooxda horumarinta samsung, waa kan:
iyo iyada oo aan loo baahnayn inaad si tartiib ah u soo dejiso xayeysiis buuxa, sida aan ku tilmaamayo qodobka labaad
Jawaab Jose Sierra Diaz
wax walboo ilaah mahadleh
Jawaab jose miguel
Mahadsanid okay, qumman Hal milyan
Andres Mendoza dijo
Waan sameeyay intaas oo dhan, laakiin daaqadaha 7 ma aqoonsana S2-kayga. Waxaan hayaa nooca 4.1.2 lagu rakibay. Ma haysto KIES rakibay, kaliya Wondershare Mobile.
Waxay ii sheegaysaa aaladdaas aan la aqoon, laakiin in kasta oo aan u xilsaaray halka ay ku sugan yihiin darawalada SAMSUNG, ma aqbalayso iyaga oo sii wadaya aaladdaas aan la garanayn.
Waxaan isku dayay dhowr fiilooyin iyo haddii ay ogaadaan mobilada kale, laakiin kan maahan.
Way jeclaan lahaayeen waxa aan sameyn karo si aan u ogaado.
Ku soo jawaab Andres Mendoza
Waad salaaman tahay, kama arki karo faylalka Huawei p9 TV-ga telefishanka adoo adeegsanaya fiilada USB-ga, wayna i garaaceysaa inay tahay su'aal darawalnimo
Ku jawaab Gody
CIISE M. MARTINEZ H. dijo
kiiskeygu waa inaan ka tirtiro xiriirada aniga samsung galaxy j7 (2016).
sm-j710mn oo waxaan rabaa inaan dib u helo. Waxaan ku aqriyay darawallada inaan iskaanbaari karo xusuusta gudaha oo aan soo ceshano. laakiin sida loo sameeyo dhab.
Ma awoodin inaan sameeyo waana muhiim. Waan ku faraxsanahay kaalmadaada
Waxbaan rakibay laakiin waxba kumaan guuleysan
Jawaab JESUS ​​M. MARTINEZ H.
Tan macnaheedu waa waan awoodaa, laakiin ma awoodin inaan ku guuleysto, ma aqaano sida loo sameeyo.
Soo dejiso Samsung USB Drivers-ka oo iska illow Samsung Kies
http://www.androidsis.com ›Telefoonada› Samsung
Kuwani rasmiga ah Samsung USB Drivers waxaad ku xidhi kartaa qalabkaaga Samsung kombiyuutarkaaga adigoon isticmaalin Samsung Kies. Halkan ka degso darawalada.
Xiaomi Mi 5X waxaa la soo bandhigi doonaa July 26 oo ay weheliso MIUI 9
Iibso HOMTOM HT50 wax ka yar 90 euro